गीत संगीतलाई मौलिक एवम अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्छ: गायक तथा मोडल सन्तोष कटवाल - KavrePress
गीत संगीतलाई मौलिक एवम अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्छ: गायक तथा मोडल सन्तोष कटवाल
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर ०९, २०७८ समय: १८:०४:३५
काभ्रेपलाञ्चोक , नेपाली सुगम संगीतका साथै म्युजिक भिडियोहरुमा मोडलको भुमीकामा निकै ब्यस्त बनेका छन सन्तोष कटवाल । मानिस एक काम अनेक भने जस्तै विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेर सफलताको शिखर चढ्दै गरेका व्यक्ति हुन ।
’एक्लै पारेर’ ’डवली मेलैमा’ ’पिडा’ याद , तिमी आयौ , तिमी टाडा लगायतका गीतमा आफनो स्वर दिइसकेका गायक हुन सन्तोष कटवाल । नेशनल इन्टरटेन्मेन्ट अवार्डमा सर्वोकृष्ट पुर्वेली गायकको अवार्ड चुम्न सफल गायक तथा मोडल सन्तोष कटवाल सगँ नव क्षितिज साप्ताहिकका लागी अरबिन्द्र गौतमले गरेको कुराकानी
तपाईको कलाकारिता यात्रा कस्तो भैरहेको छ ?
लकडाउन पछिको समयमा मेरो कलाकारिता यात्रामा थप नयाँ सोचका साथ अगाडि बढेको छ । लकडाउनमा भएको उकुसमुकुस बाट फराकिलो सोचका साथ सांगीतिक क्षेत्रमा आउनको लागी थप गृहकार्य गरेर थप परिस्कृत ढंगबाट यात्रा पुन शुरु गरेको छु ।
कलाकारिता क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
सानै उमेर देखी कलाकारिता प्रतिको मोह र प्रतिभा भएका कारण शुरुको अवस्थामा आफनो रुची पुरा गर्नको लागी कलाकारितामा हानिए । कलाकारिताको नशाको कारणबाट गीत संगीतमा नै सक्रिय रुपमा रहेको छु । जसको माध्यमबाट सफलता पनि मिलेको छ ।
त्यस्ता तीन वटा काम जुन गर्दा आफुलाई खुशीको महसुस हुन्छ ?
गीत गाउँदा , मोडलिङ्ग ,र साथी भाई हरु सगँ नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्न घाम गर्न पाउँदा असाध्यै खुशी लाग्छ ।
तपाईको आउदै गरेको गीत संगीत कस्तो किसिमको रहेको छ ?
हिजो मात्रा प्रमोद खरेलको स्वर तथा मेरो शब्द तथा अभिनयमा रहेको बवार्द नामक गीत बजारमा आएको छ । जुन गीतमा प्रेमील जोडि विचको प्रेम प्रसङगलाई समेटिएको छ । छिट्टै मौलिक पन बोकेको पुर्वेली गीत गर्मी ठाउँ झापा गीत बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ ।
तपाईले नेपाली कलाकारितालाई कुन रुपमा देख्नु हुन्छ ?
नेपाली कलाकारिता क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन तथा यस क्षेत्रामा लाग्ने सर्जक सष्ट्रा हरुलाई हौसला प्रदान गर्दै आगामी दिनमा नेपाली कलाकारिताको क्षेत्र लाई अगाडि बढाएर अगाडि बढेको खण्डमा नेपाली कलाकार ले पनी फरक किसिमको फड्को मा¥थीयो की ?
नव कलाकार एवम अग्रज हरुमा चै कस्ता कुरामा ज्ञान हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
सकारात्मक सोच र कलाकारिता प्रतिको मोहलाई जिवन्तता दिदै नेपाली मौलिक पनको आभाष दिने किसिमको कलाकारहरुले आफनो सिर्जना प्रस्तुत गर्नुपर्छ । दिगो र दिर्धकालिन सोचको साथ कलाकारितामा आएको खण्डमा कलाकारतालाई स्वच्छ र परिकृत ढंगबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ । हामीले हाम्रो कला सस्कृतिलाई संरक्षण गदैँ विश्व परिवेश र भुगोल अनुरुपको संगीतको विकाशमा जोड दिनुपर्छ ।
तपाईले स्वरमा गरेका सर्वाधिक दर्शकको मनमा बस्न सफल गीत कुन कुन हुन ?
’एक्लै पारेर’ ’डवली मेलैमा’ ’पिडा’ याद , तिमी आयौ लगायतका गीतमा रहेको मेरो शब्द तथा स्वरलाई लाई आम भगवान रुपी दर्शक तथा स्रोताले अधिक मन पराई दिनुभयो जस्को कारणबाट मैले अवार्ड पनी जित्न सफल भए ।आगामी समयमा तपाईको कलाकारिता प्रति योजना के रहेको छ आगामी समयमा रजतपटको क्षेत्रमा आफनो कलालाई प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको छु । जसको लागी मैले बर्तमान समयमा विभिन्न तयारीहरु गरिरहेको छु । साथै नेपाली सुगम गीतका भिडियोका साथै पप आधुनिक गीतमा पनी आफनो अभिनय कलाको माध्यमबाट थप प्रभावकारी काम गर्ने र फरक धारबाट अगाडि बढने योजना रहेको छ ।
जिवनको कुनै अविश्स्मणिय क्षण केही छन की ?
पहिलो पटक आफनो आवाजमा गीत गर्दाको समयमा निकै अफटयारो लागेको थियो । जुन गीतमा आफनो स्वर भर्दा आफुलाई खुशी एकातिर थियो भने आफैमा चुनौतीको पहाड आफ्ुमा खडा भएको महसुस गरेको थिए ।
अन्तमा तपाईका शुभचिन्तकहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
नेपाली कलाकारितमा गरिरहेको छु । हजुरहरुकै मायाले म टिकेको छु र साथ सपोर्ट, सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला । मेरो स्वर र अभियनमा रहेका गीत संगीतलहरुलाई माया गरिदिनु होला यही भन्न चाहन्छु ।
जसु याक्खाको निर्देशनमा ’बवार्द भो ’ सार्वजनिक
लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेलको स्वरमा रहेको ’बवार्द’ गीतको भिडियो डिजिटल बजारमा सार्वजनिक छ । प्रेमील जोडीहरुको मायाको भावलाई गीतमा कलात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रेममा भएको घातबाट जिवनमा पर्ने चोटलाई गीतमा समेटिएको छ । सन्तोष कटुवालको शब्द र संगीत एवम अलिफ खानको एरेन्ज गीतमा रहेको छ । फरक किसिमबाट प्रेमील जोडिको भावनालाई समेटिएको गीतकार सन्तोष कटुवालले बताए ।
पछिल्लो समयमा सर्वाधिक लोकप्रिय निर्देशक मानिएका जस बहादुर याक्खा जसुको निर्देशन भिडियोमा रहेको छ । दिनेश पराजुलीको छायाँकन , अमृत चापागाईँको सम्पादन भिडियोमा छ । ’बवार्द’ गीतको भिडियोमा सन्तोष कटुवाल , अनु चौलागाईँ र एलोन क्षेत्रीको फिचरिङ रहेको छ ।